वित्तीय विवरणको प्रभावले सातामा २६.७५ अंकले बढेको नेप्सले तोड्यो १३०० विन्दुको परीक्षण, सातामा सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीहरु कुन ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण वित्तीय विवरणको प्रभावले सातामा २६.७५ अंकले बढेको नेप्सले तोड्यो १३०० विन्दुको परीक्षण, सातामा सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीहरु कुन ?
on: ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १५:३४ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
वित्तीय विवरणको प्रभावले सातामा २६.७५ अंकले बढेको नेप्सले तोड्यो १३०० विन्दुको परीक्षण, सातामा सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीहरु कुन ?
जेठ २, काठमाडौं (अस) । सातामा नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ७५ अंकले बढेको छ । गत साताको अन्तिम दिन वैशाख २६ गते हजार २९१ दशमलव ९६ विन्दुमा बन्द भएको थियो भने यस साताको अन्तिम दिन जेठ २ गते १ हजार ३१८ दशमलव ७१ विन्दुमा बन्द भएको छ । गत साताको तुलनामा नेप्से परिसूचक २३ दशमलव ६८ अंकले बढ्न पुगेको छ । साताको शुरुको दिन नेप्से १ हजार २९५ दशमलव शून्य ३ विन्दुमा बन्द भएको थियो । सातामा नेप्से चारदिन बढेको छ भने अन्तिम दिन बिहीवार २ दशमलव २९ अंकले घटेर बन्द भएको छ ।
चार दिनमा परिसचूक २९ दशमलव शून्य ४ अंकले बढेको थियो । मंगलवार नेप्से साताकै सबैभन्दा बढी १४ दशमलव १२ अंकले बढ्न पुगेको थियो । चार दिन बढेको बजारमा लगानीकर्ताहरु नाफा बुक गर्न लागेपछि बजार थोरै अंकले करेक्सन भएको हो ।
सातामा नेप्से परिसूचक २३ दशमलव ६८ अंक बढ्न पुगेको छ । सातामा चारदिन बजार बढेको थियो भने अन्तिम दिन घटेको थियो । बजारमाथि जान हाल प्रकाशित भइरहेको तेस्रो वित्तीय विवरणको प्रभाव देखिन्छ । साताको शुरूको दिन आइतवार ३ दशमलव शून्य ७ अंक बढेको बजार दोस्रो दिन ६ दशमलव ३ अंक बढ्न पुगेको थियो र तेस्रोदिन १४ दशमलव १२ अंकले बढेको थियो । सो दिनको बढाइले नेप्से विन्दु थोरैमाथि जान सहयोग गरेको हो ।
गत साता नेप्से १ हजार ३३४ विन्दुभन्दा माथि जान सकेन । बुधवार नेप्से सो विन्दुसम्म पुगेर अन्त्यमा १३२१ विन्दुमा बन्द भएको थियो । पाँच कारोबारको दिनमा आइतवार सबैभन्दा कम १ हजार २९५ दशमलव शन्य ३ विन्दुमा रहेको थियो ।
गत साताको तुलनामा बजार पूँजीकरण २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बढेको छ ।गत साताको बिहीवार वैशाख २६ गते रू. १६ खर्ब रहेको बजार पूँजीकरण जेठ २ गते बिहीवार रू. १६ खर्ब ३६ अर्ब रहेको छ।नेप्सेले मापन गर्ने ‘क’ वर्गको सेन्सेटिभ इन्डेक्स ४ दशमलव ९२ अंकले बढेको छ । गत साताको अन्तिम दिन वैशाख २६ गते २७६ दशमलव ५२ विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स जेठ २ गते २८१ दशमलव ४४ विन्दुमा पुगेको छ ।
सातामा १ करोड ५२ लाख ६४ हजार ८३ कित्ता शेयरको रू. ४ अर्ब ९४ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । गत सातामा १ करोड २४ लाख १ हजार ८३८ कित्ता शेयरको रू. ३ अर्ब ४६ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । गत साताको तुलनामा कारोबार रकम रू. १ अर्ब ४८ करोडले बढेको हो ।
गत साताका २ दिन कारोबार रकम रू. १ अर्ब नाघेको थियो भने गत साता कारोबार रकम पाँचैदिन अर्ब पुग्न नसकेपछि कारोबार रकम ४२ दशमलव ७२ प्रतिशत बढ्न पुगेको हो ।
अघिल्लो साताको तुलनामा गत साता उपसमूहमा आएको वृद्धि
यस सातामा उपसमूहमा म्युचुअल फण्ड थपिएको छ । गत सातासम्म ११ समूहको कारोबार हुने गरेको थियो भने यस सातादेखि १२ समूहको कारोबार हुने भएको छ । चार दिन बढेको बजारमा म्युचुअल फण्डको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ ।
सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीहरु
सातामा सात वाणिज्य बैंकहरुको सर्वाधिक कारोबार भएको छ भने एक शिवम् सिमेण्ट र दुई इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार हुनेमा शिवम् सिमेण्ट परेको छ ।
सातामा १ करोड ९२ लाखभन्दा बढी शेयर सूचीकृत
सातामा ६ कम्पनीको १ करोड ९२ लाख ६८ हजार १४१ दशमलव ४२ कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । नेपाल एग्रो लघुवित्त र गणपति माइक्रोफाइनान्सको आईपीओ शुक्रवार सूचिकृत भएकाले आइतवारदेखि दोस्रो बजारबाट कारोबार गर्न सकिन्छ भने बाँकी कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार भएको छ ।
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १४:१०
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १२:१४
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १२:०२